Fibromyalgia: Inona ny sakafo mety sy dietim-bary ho an'ireo manana fibromyalgia?
25 / 07 / 2018 /Fanamarihana 4/i Ny fanaintain'aretina, kalitao Articles/av loza
Fibromyalgia: Inona ny sakafo mety? | Ny toro-hevitra momba ny sakafo mivalona sy ny sakafo ho an'ny manana fibromyalgia
Mijaly amin'ny fibromyalgia ve ianao ary manontany tena hoe inona no sakafo mety aminao? Ny fikarohana natao dia nanaporofo fa maro ny olona manana fibromyalgia no mety hisy fiatraikany tsara amin'ny fihinanana sakafo mety sy fanarahana ireo torohevitra momba ny sakafo atolotray eto ireo - koa antenaina fa hahazo vokatra tsara amin'ny "fibromyalgia diet" soratantsika ato amin'ity lahatsoratra ity mifototra amin'ny fandinihana ankapobeny. Ny lahatsoratra dia handrakotra ny sakafo mahavelona sy ny sakafo amin'ny karazan-tsakafo tokony hohaninao sy karazana sakafo tokony hialanao - matetika mifandraika amin'ny anti-inflammatoire contre anti-inflammation.
[manosika h = »30]
Tatitra fikarohana: Ny Fibromyalgia tsara indrindra
Araka ny fantatra aretin-kozatra fitiliana fanaintainana maharitra izay miteraka fanaintainana lehibe eo amin'ny hozatra sy taolana - ary koa ny torimaso ratsy kokoa ary matetika no tsy mahomby ny fiasan-tsaina (ohatra, ny fitadidiana sy fibrous zavona). Mampalahelo fa tsy misy fanasitranana, fa amin'ny fampiasana ny fikarohana dia mety ho lasa hendry kokoa amin'ny zavatra mety hanamaivana ny aretina sy ny soritr'aretiny. Ny fihinan-kanina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famerana ny fihenan'ny fihetseham-po ao amin'ny vatana sy ny fampidinana ny fahatsapana fanaintainana amin'ny kofehin'ny hozatra maharary. Ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny fandalinana fanadihadiana lehibe nataon'i Holton et al izay misy fikarohana fikarohana 29.
Betsaka ny olona manana fibromyalgia no mahalala ny maha-zava-dehibe ny fihainoana ny vatana mba hisorohana ny tampon'ny fanaintainana sy ny "flare ups" (fizarana misy soritr'aretina lehibe kokoa). Noho izany, olona maro ihany koa no tena miahiahy momba ny sakafon'izy ireo, noho ny fahafantaran'izy ireo fa ny sakafo mety dia mampihena ny fanaintainana amin'ny fibromyalgia - fa fantatr'izy ireo ihany koa fa ny karazan-tsakafo diso dia mety miteraka fanaintainana noho ny soritr'aretin'ny fibromyalgia. Raha fintinina dia te hisoroka ny sakafo pro-inflammatoire (anti-inflammatoire) ianao fa aleo mihinana sakafo anti-inflammatoire (anti-inflammatoire) bebe kokoa. Fandinihana topimaso (meta-analysis) navoaka tao amin'ny diary fikarohana malaza Pain Management nanatsoaka hevitra fa ny tsy fahampiana amin'ny otrikaina maromaro dia mety hiteraka soritr'aretina avo lenta kokoa ary ny sakafo mety dia manampy amin'ny fampihenana ny fanaintainana sy ny soritr'aretina. Jereo ny rohy mankany amin'ny fandinihana amin'ny faran'ny lahatsoratra. (1)
Minoa na tsia: Tamin'ny andro taloha dia noheverina fa ny fibromyalgia dia aretina ara-tsaina
Taona maro lasa izay dia nino ny dokotera fa aretina ara-tsaina fotsiny ny fibromyalgia. Efa hatramin'ny 1981 no nanamafisan'ny fandalinana voalohany ireo soritr'aretin'ny fibromyalgia ary tamin'ny taona 1991 Amerika College of Rheumatology dia nanoratra torolàlana hanampiana ny fagnomyalgia. Mivoatra hatrany ny fikarohana sy ny fikarohana klinika ary izao dia afaka mitsabo ny fibromyalgia izao, miaraka amin'ny fitsaboana hafa, amin'ny antsointsika hoe fibromyalgia.
Hodinihintsika akaiky izao izay tokony hampidirin'ireo manana fibromyalgia amin'ny sakafon'izy ireo - ary karazan-tsakafo inona no tokony hialan'izy ireo - mifototra amin'ny fanadihadiana lehibe nataon'i Holton et al (2016). Manomboka amin'ny sakafo tokony hohanin'ny olona iray isika.
Vakio koa: - Fanatanjahan-tena 7 ho an'ny Rheumatists
Sakafo tokony hohaninao raha manana fibromyalgia ianao
Voankazo sy legioma (anisan'izany ny ambany tongotra avo lenta)
Ireo toe-javatra toy ny tsinay tezitra, ny hatavezana ary ny diagnostika autoimmune dia fahita matetika eo amin'ireo izay nasehon'ny fibromyalgia.
Ny sasany amin'ireo mpikaroka tsara indrindra any an-tsaha dia manaiky fa ny sakafo tsy misy kaloria ambany sy ny atin'ny fibra avo izay misy koa ny antiôtimia sy ny fitokimiazika (otrikaina mahasalama). Mahita be dia be amin'ireny isika amin'ny legioma sy voankazo - ary izany no antony nanoloranaana hevitra ny sakafo voajanahary toy izany dia tokony ho ampahany lehibe amin'ny sakafo ananan'ireo izay manana fibromyalgia. Ireo izay saro-pady loatra dia tokony hanandrana fomba fodmap ambany koa hanakanana ireo legioma sy voankazo tsy zakan'izy ireo.
Ohatra ny legioma tsara ho an'ireo manana fibromyalgia ambany:
Ny legioma rehetra ao amin'ny efamira ambany dia raisina ho azo antoka sy tsara ho an'ireo manana fibromyalgia sy IBS.
Ohatra ireo legioma izay mety ho tsara sitrapo miaraka amin'ny fibromyalgia (faribolana avo lenta):
Ireo dia ohatra iray amin'ny legioma izay ao anaty fodmap. Midika izany fa afaka manome sakafo mahavelona be dia be anao izy ireo amin'ny fibromyalgia, fa azonao atao ihany koa ny mamaly ny sasany amin'ireo legioma samihafa. Manoro hevitra anao izahay mba hametraka drafitra iray ary hizaha toetra ny tenanao - tsirairay.
Ohatra amin'ireo voankazo mahavelona ho an'ny manana fibromyalgia ambany:
Zava-dehibe ny manamarika fa ireo manana fibromyalgia dia toa manana fandeferana kokoa amin'ny akondro masaka raha ampitahaina amin'ny akondro maitso.
Ohatra amin'ireo voankazo mahasalama misy fibromyalgia (fantsom-tongotra avo):
Voankazo maina (toy ny raisy)
Raha misy zavatra ao amin'ny lisitra FODMAP izay noraisinao ary miharatsy ny soritr'aretinao - dia fantatrao izay tokony hialanao.
Ohatra amin'ny voankazo manankarena antioxidant ho an'ny manana fibromyalgia:
Sakafo manankarena amin'ny omega-3
Ny Omega-3 dia asidra matavy ilaina. Izy io dia otrikaina ilain'ny vatanao, ankoatry ny zavatra hafa, hiadiana amin'ny fanehoan-kevitra mihanaka, saingy tsy afaka manao izany samirery. Noho izany dia mila mahazo omega-3 ianao amin'ny alàlan'ny sakafo izay ihinanana.
Trondro mangatsiaka, atody, voan-boninkazo ary tofu no heverina ho loharano omena-3 tsara indrindra. Mackerel no manana ny votoaty avo indrindra amin'ny omega-3, ka ny fihinanana ohatra voatabia voatabia amin'ny mofo vaventy dia mety ho hita izay ilana azy. Salmon, trout, herring ary sardines dia loharano tsara amin'ny omega-3.
Ohatra amin'ny sakafo avo amin'ny omega-3 ho an'ireo manana fibromyalgia:
Ny votoatin'ny proteinina malefaka
Ny havizanana, mihena ny angovo ary ny havizanana dia soritr'aretina iraisana ao amin'ireo voan'ny fibromyalgia. Noho izany, tena zava-dehibe tokoa ny famerana ny fihinanana ny gliosida ary hampiakatra ny haben'ny proteinina ao amin'ny sakafo.
Ny antony tianao hohanina sakafo misy manana proteinina matavy be raha toa ka manana fibromyalgia ianao dia satria manampy ny vatana amin'ny fifehezana ny siram-dra ary mihazona izany tsy tapaka mandritra ny andro. Araka ny fantatra, ny siramamy tsy mandeha amin'ny rà dia mety hiteraka harerahana bebe kokoa ary faniriana mafy amin'ny sakafo misy siramamy.
Ohatra iray amin'ny sakafo misy proteinina mahia ho an'ireo manana fibromyalgia:
Sakafo sôkôla (na dia vita avy amin'ny ronono mandoza aza, raha toa ka mihetsika amin'ny vokatra vita amin'ny ronono ianao, dia tokony hihazakazaka kokoa)
Ronono soja kely madinidinika
Ny sasany dia misakafo maivana miorina amin'ny zavatra nianarantsika hatreto
Miorina amin'ny fahalalana izay nianarantsika hatreto, dia misy soso-kevitra vitsivitsy izahay momba ny sakafo maivana izay azonao andramana hiditra ao anatin'ny andro.
Avocado miaraka amina berry smoothie
Araka ny voalaza, ny zavokà dia misy tavy mahasalama izay manome angovo mety ho an'ireo tratry ny fibromyalgia. Izy ireo koa dia misy vitamina E izay afaka manampy amin'ny fanaintainan'ny hozatra, ary koa ny vitamina B, C ary K - miaraka amin'ireo mineraly manan-danja vy sy manganese. Noho izany, mamporisika anao izahay hanandrana savoka iray izay misy avokado miaraka amina voaroy misy antioksida.
Salmon miaraka amin'ny tonon-trondro sy broccoli
Trondro hisakafo hariva. Manoro hevitra mafy izahay fa hihinana trondro menaka ianao, aleo salmon, farafaharatsiny intelo isan-kerinandro, fara fahakeliny, raha voan'ny fibromyalgia. Mino izahay fa tokony hanandrana mihinana azy in-3 4-5 isan-kerinandro ianao raha toa ka voan'ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainana. Ny salmon dia misy omeo-3 avo dia avo, ary koa ny proteinina malefaka izay manome angovo mety. Atambatra azy amin'ny broccoli nofonosina miaraka amin'ny antioxidant sy ny walnut. Samy salama sy tsy mahomby.
Ranom-boankazo misy masombiera
Soso-kevitra tsara iray hafa tsara amin'ny sakafo fibromyalgia. Raha ny voasarimakirana, ny ranom-boasary dia misy vitamina sy mineraly mety mihetsika toy ny anti-inflammatory ary noho izany dia mampihena ny fanaintainana. Ny voan'ny Chia dia misy proteinina, fibre, omega-3s sy mineraly avo indrindra, ka ny farany no iray amin'ireo endrika tsara indrindra amin'ny sakafo mety azonao.
Sakafo izay tokony hohalavirina raha manana fibromyalgia ianao
Ny siramamy dia pro-inflammation - izay midika fa mampiroborobo sy mamorona fanehoan-kevitra mamaivay. Noho izany, ny fihinanana siramamy avo lenta dia tsy zavatra hendry indrindra atao indrindra rehefa manana fibromyalgia ianao. Ho fanampin'izany, ny tranga misy ny siramamy avo lenta matetika dia mitarika fitomboan'ny lanja, ary izany dia afaka mametraka aretina bebe kokoa amin'ny tonon-taolana sy hozatra. Ireto misy ohatra momba ny sakafo sy zava-pisotro misy siramamy gaga be dia be:
Mofomamy, mofomamy sy mofomamy
Bagets sy churros
Betsaka ny olona manana fibromyalgia no milaza fa miharatsy ny soritr'aretina rehefa misotro toaka izy ireo. Izany ihany koa ny zava-mahadomelina anti-inflammatoire sy analgesic maromaro izay tsy dia mihetsika tsara amin'ny alikaola - ary izany dia mety hisy fiatraikany na fihenan'ny vokany. Ny alikaola koa dia misy kaloria avo lenta ary matetika ny siramamy - izay manampy amin'ny fanomezana fihetseham-po mampihetsi-po bebe kokoa sy fahatsapana fanaintainana ao amin'ny vatana.
Sakafo avo misy otrikaina
Ny fihinanana mofomamy, mofomamy, ny vary fotsy ary ny mofo fotsy dia mety mitarika ny haavon'ny siramamy amin'ny rà ary avy eo tezitra. Ny ambaratonga tsy mitombina toy izany dia mety hiteraka harerahana sy miharatsy ny fanaintainana mijaly ho an'ireo manana fibromyalgia. Rehefa mandeha ny fotoana, ny tsy fitovian-kevitra toy izany dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny takelaka insuline sy ny fahasarotan'ny vatana amin'ny fifehezana siramamy amin'ny ra ary noho izany ny fatran'ny angovo.
Aza adino ny baomba karbônina:
Candy sy zava-mamy
Sakafo mahasalama mahasalama sy mofomamy be
Rehefa endasina menaka ianao dia mamorona fananana mampivadika izany - izay mihatra amin'ny sakafo nendasina ihany koa. Ny fandinihana dia naneho fa ny sakafo toy izany (toy ny french fries, akoho amam-borona ary horonana lohataona) dia mety hampitombo ny soritr'aretin'ny fibromyalgia. Izy io koa dia mihatra amin'ny sakafo voahodina, toy ny donuts, karazana biskuitra maro ary pizza.
Torohevitra momba ny sakafo hafa ho an'ny manana fibromyalgia
Sakafo legioma ho an'ny fibromyalgia: "Go vegan"
Betsaka ny fikarohana natao (anisan'izany i Clinton et al, 2015 sy Kaartinen et al, 2001) izay nanaporofo fa ny fihinanana sakafo fihinana vegetarianina, misy zava-boajanahary miaro ny antioxidant, dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanaintainan'ny fibromyalgia, ary koa. soritr'aretin'ny osteoarthritis.
Ny sakafon-tsakafo dia tsy natao ho an'ny rehetra ary mety ho sarotra ny mifikitra, fa ny fiezahana hampiditra legioma betsaka ao anaty sakafo dia tena ilaina tokoa. Izany dia hanampy anao koa hampihena ny fihinanana kaloria ary ahazoana lanja tsy ilaina. Noho ny fanaintainana mifandraika amin'ny fibromyalgia, matetika dia lasa sarotra be ny mihetsika, ary avy eo dia tonga ny kilao fanampiny. Ny fiasana mavitrika amin'ny fihenan'ny lanja, raha tiana, dia mety hiteraka tombony lehibe amin'ny fahasalamana sy vokatra tsara - toy ny tsy fanaintainana amin'ny fiainana andavanandro, fanatsarana torimaso ary tsy fahaketrahana.
Misotroa rano Norvezy tsara
Any Norvezy dia mety manana rano tsara indrindra eran'izao tontolo izao isika amin'ny paompy. Ny torohevitra tsara izay omen'ny mpitsabo otrikaina an'ireo izay voan'ny fibromyalgia na fitiliana fanaintainan'ny fanaintainana dia ny fisotro rano be dia be ary alefa foana mandritra ny andro. Marina fa ny tsy fahampian'ny fitrandrahana dia afaka mamely ireo izay be fibro fanampiny mafy noho ny hoe ny tahan'ny angovo matetika dia ambany noho ny an'ny hafa.
Ny fiainana miaraka amin'ny fibromyalgia dia ny fanaovana fanitsiana - toy ireo manodidina anao tsy maintsy mijery anao (izay resahintsika ao amin'ilay lahatsoratra nifandraisanay etsy ambany). Ny sakafo ara-dalàna dia mety mandeha tsara amin'ny sasany, fa mety tsy hahomby amin'ny hafa - samy hafa daholo isika, na dia mitovy aza ny fitiliana antsika.
Holton et al, 2016. Ny anjara asan'ny sakafo amin'ny fitsaboana fibromyalgia. Fitantanana fanaintainana. Volume 6.
NEXT PAGE: - Torohevitra 7 hiaretana ny fibromyalgia
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgidietten2-700px.jpg?media=1648573622 365 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2018-07-25 10:07:122019-06-20 16:17:44Fibromyalgia: Inona ny sakafo mety sy dietim-bary ho an'ireo manana fibromyalgia?
Misy boky amin'ny resa-piainana sy sakafatra ve ho an'ireo manana fibromyalgia? Ka ny iray ve afaka manao lovia samy hafa?
Tena io no nihinako nandritra ny 2 taona lasa. Tsy marary intsony, fa very 47 kilao. Ny sasany amintsika dia voan'ny fanaintainan'ny fanaintainana mafy ary indrisy fa tsy dia manampy loatra amin'ny fihinanana sakafo na fanatanjahan-tena. Amiko manokana dia matetika miafara amin'ny fanaintainana mafy sy mandoa izany raha fanazako be loatra. Efa nanao spas sy workout izay nanaiky aho fa ny fanatanjahan-tena dia misy fiantraikany mifanohitra amiko.
Mamaky am-pitiavana ny lahatsoratra momba ny osteoarthritis aho sy ny fomba fihinanana anti-inflammatory. Tena tsara eto.
Ka araho ny lahatsoratra momba ny fomba iray hihinana ny fibro iray hampihenana ny fivontosana sy hikorontana !! Fa maninona no vokatra ronono sy ronono tsy soso-kevitra amin'ny osteoarthritis, fa tsy an'ny fibroids? Fantatra tsara fa amin'ny fibro dia tokony hihoatra ny vokatra vita amin'ny ronono sy ny ronono isika. Maninona ny fampahalalana mifangaro sy mifanohitra toy izany?
Nioclay v / Vondt.net hoy:
Misaotra indrindra anao nifandray aminay. Efa havaozina izao lahatsoratra izao.
Fikarohana: Mety izany ny antony 'Fibro zavona' Famotopotorana: Ny proteinina roa afaka manampy ny fibromyalgia amin'ny diagnostika